TALOOYINKA UGU MUHIIMSAN EE BARASHADA BEERAHA EE BILAWGA AH - CHERRY
Su'aasha ah ee jeeriga gooyaa ee guga waa mid ka mid ah muranka ugu badan ee bannaanka u khibrad iyo kuwa bilowga ah. Kama dambaysta kuma dhicin in ay jebiyaan laanta, maxaa yeelay waxay ka baqayaan inay waxyeeleeyaan dhalidda iyo daciifinta geedka.
Beeraha xirfadlayaashu waxay tixgeliyaan arrintan macquulnimada mana fahmin sababta dad badani dayaceen nidaamkan muhiimka ah. Fikraddooda, johannesörka manjooyin waa mid aad u muhiim ah waxayna kordhineysaa kororka dhirta iyo hagaajinta dhadhanka berry.
Ma taqaanaa? Waxaa ka mid ah qaar ka mid ah kuwa bannaanka u ah xirfad leh waxaa jira ra'yi ah in jeeriga gooyaa keenaysaa istaagitaanka, daciifinta geedka iyo si xun u saameeyaa dhalidda. Si kastaba ha noqotee, waxaas oo dhan maahan wax ka badan aaladda, sababtoo ah cawaaqibyadan oo kale waxay dhacdaa marka geedku la dayaco iyo xanuuno. Haddii geedkaagu si fiican u joogteeyo, gooyaa waxay faa'iido u leedahay.
Xaaladaha intooda badan, sababta ugu weyn ee dabeecada xun ee la xidhiidha manjooyin geedo cherry waa jaahwareer hoose ee xeerarka aasaasiga ah ee nidaamka.
Waxa aad u baahan tahay in la gooyo cherry guga
Wixii bannaanka u janjeera ee doonaya in ay u koraan ubaxyo ubax iyo fruiting, waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo ujeedooyinka iyo mabaadi'da manjooyin guga ee jeeriga si faahfaahsan. Cherry, ka duwan dalagyada miraha kale, waa mid aad u hore u Bisaylkiisa, taas oo ah sababta ay u badan tahay in sirqoollada beerta.
Laakiin marxaladan sida sidoo kale waa khasaare ah ee jeeriga: geedku si dhakhso ah ayuu u baaba'ay, si degdeg ah u gaboobay oo lumiyay jahwareerkiisa. Sidaa darteed, si aan u lumin a cherry ah oo dhan, waxay u baahan tahay in la gooyaa hab wakhti ah.
Xoqitaanka ayaa loo baahan yahay si loo helo:
si ay u sameeyaan taajkii geedkii qaabka saxda ah, si looga hortago mid-dhinaciisa iyo horumarka aan caadiga ahayn;
hagaajinta dhadhanka iyo cabbirka berry;
la burburiyo laamaha jirran, taas oo yareyneysa khatarta cudurrada iyo weerarka cayayaanka;
dib u soo nooleynta geedka iyo ka hortaga da 'da'da waqti dheer.
Sidee iyo goorta la jaleecayo jeeriga guga: xeerarka guud
Haddaba ka fiirso marka ay ka fiican tahay in la gooyo cherry: guga ama dayrta, si loo hubiyo natiijada ugu fiican ee fruiting. In beerta, waxaa jira guga guud, dayrta, jiilaalka iyo xataa manjooyin xagaaga, kaas oo ah caawiye dheeraad ah.
Guga jeeriga ka hor inta aan la gooyin. Haddii, ka dib jiilaalka, geedka waxaa waxyeello by dhaxan, manjooyin la sameeyo wax yar ka dib, marka ubbooyinku bilaabaan sii kordhaya si loo soo saaro caleemaha qabow. Inta badan, manjooyin guga ee jeeriga ku dhacaa badhtamaha March - bilowga Abriil, maadaama this geed kulaylka-jecel uma dulqaadanayo dhaxan daran.
Haddii aad ku aragtid laamaha jirrada, waxay u baahan yihiin in laga saaro, haddii kale waxay ku dhici karaan geedka oo dhan. Sidoo kale ka saari laanta deriska la ah, oo gaabinaya iyo dhumucda taajka. Caleemaha sanadlaha ah ee ku saabsan 20-40 dheer dheer uma baahna in la gooyo. Jeeriga guga waa gundhiga, sameynta taajka geed, waxaana lagu fuliyaa hababka qaarkood, taas oo ku xiran kala duwanaanta, da'da iyo geed.
Haddii manjooyin guga ee ka caawinaya cherry si ay u soo kabsadaan jiilaalka ka dib, ka dibna manjooyin dayrta diyaariyo dhirta loogu talagalay qaboobaha jiilaalka dheer. Gooyashada noocaan ah badanaa waa Sebtembar - horraantii Nofembar waana mid ka hortag ah dabeecadda.
Xeebaha koonfureed, dhirta ayaa isla markiiba la gooyaa kaddib marka caleemuhu dhacaan. Inta lagu jiro muddadan, korniinka waaweyn ayaa la gooyaa, taasoo ka hortagaysa in geedku ka soo baxo, iyo sidoo kale dhumucda taajka. Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad ka soo qaadatid laamaha qalalan, waxyeello leh, gubanaayo, waxay ka badbaadin doontaa geedaha kale ee infekshanka.
Xirmooyinka loo baahan yahay in lagu daaweeyo rinjiga ama garoonka beerta. Manjooyin dayrta waxaa la sameeyaa 1 mar 3 sano. Ma dhali kartid geedaha ka hor intaan la karin, sababtoo ah taasi waxay hoos u dhigi doontaa adkaysiga geedka iyo wiiqa.
Waa muhiim! Haddii ay dhacdo in la ogaado laanta ay saameysey cudurka, waa in isla markiiba laga saaro oo la gubaa, inkastoo xilli-ciyaareedka. Tani waxay kaa caawin doontaa badbaadinta geedka iyo ka hortagga caabuqa beerta oo idil.
Beerta qaar ka mid ah waxay u sameysmaan taajka geed geedka. xilliga jiilaalka. Xilliga jiilaalka, kaliya geedaha qaangaarka ah waa la gooyaa, waxay u dulqaadanayaan dhirta ka wanaagsan kuwa yaryar. Marka dhirta ay hurdaan, waxay si dhakhso ah uga soo kabanayaan kadibna way ka fudud yihiin marka la barbardhigo xilliga dayrta ama gu'ga. Intaa waxaa dheer, xilliga qaboobaha waxaa jira khatarta ugu yar ee cayayaanka cayayaanka.
Ka dib markii la gooyo, jarista waa in lagu baaraandego boog ama rinjiye. In dhaxan daran, jilif ah ee geedka wuxuu noqonayaa mid aad u nugul, oo waxaa lagu burburin karaa inta lagu jiro manjooyin, sidaas darteed waa suurtogal in la gooyo ee xaaladaha noocaas ah.
Ugu dambeyntii shaqaynta xagaaga geedo cherry, taas oo ah caawiye, sida in la gooyaa cherry si buuxda u baahan tahay oo keliya guga.
Xilliga kuleylka, marka geedku ku jiro xaalad koritaan firfircoon, xakamaynta ayaa si adag loo adkeeyay.
Sidaa darteed, inta lagu guda jiro muddadan, kaliya sixitaanka yar ee taajka waa la fuliyaa, ka saara laanta bukaanka haddii ay dhacdo in la ogaado.
Qodobo ku dhajinta jiilka yar yar iyo kuwa hore
Jeeriga guga waa in uu ku salaysan yahay nooca iyo da'da geedka, sidaas darteed bannaanka u janjeera waxay noqon doontaa mid waxtar leh si aad u ogaato farqiga u dhexeeya doorashooyinka goynaya.
Waa muhiim! Xaalad manjooyin qasab ah - qalab fiiqan oo la adeegsan karo oo aan u keenin waxyeelo daran oo geedka.
Sida loo gooyo cherry yar yar
Geedka geedka la gooyey ayaa la sameeyaa isla markiiba ka dib marka la beerto, waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameysid qaabka saxda ah ee taajka iyo ka caawinta xididada si aad ugu beddesho meel cusub. Gooyo waxaa la sameeyaa ka hor inta aan la bararin si ay ilaa 5 xoog leh, laamood oo si wanaagsan loo horumariyo on seedling. Laamaha la xushay waa inay ahaataa meel fog oo aan ka yarayn 10 cm midba midka kale waxayna u koraan dhinacyada.
Wax kasta oo kale ayaa laga saaraa, nabarradu waxay daboolaan rinji ama karkaraya. Inta lagu jiro guga, waxaa la ogaaday in baadiyaha ma dhumuc weyn, iyo taajku si fiican u horumaraya. Dhammaan laamihii ka billaabay inay gudaha u soo baxaan, waa in laga saaraa iyadoo la socoto caleemo cusub oo lagu sameeyay geedkii.
Sida geedku u korayo, laamaha cusub ee qalfoofka ayaa laga tegayaa ilaa 15 ka mid ah shaqooyinkaas, kuwaas oo loo baahan yahay in si taxadar leh loo sameeyo, tan iyo goynta geedo cherry ah ee guga si sax ah waa shaqo adag. Khaladaadka la sameeyey intii lagu guda jiro manjooyin wiyil ah waxay keentaa in dhibco geedka timaado mustaqbalka.
Waa muhiim! Geedo yar yar ka dib markii ugu horeysay ee xilli sii kordhaya laguma talinayo in la gooyaa ee dayrta. Geedka daciif ah uma adkeysan karo qaboobaha qaboobaha.
Sida loo dhajiyo jeeriga fruiting
Miro cherry budada ah ayaa la samayn karaa hal mar sanadkiiba guga, tani waxay noqon doontaa ku filan haddii shaqada si sax ah loo sameeyo. Si geedkii loo gaari karo qorraxda qoraxda, waxaa lagama maarmaan ah 5 sano ka dib markii la beero, marka geedku loo arko in la sameeyay, taajkii waa in la gooyaa si sax ah.
Sidaas, gawska miro-geedka ah ee guga waa la fuliyaa sida waafaqsan nidaamka caadiga ah:
saarista dhammaan laamihii dhaadheer ee geedka, marka laga reebo laamihii ku yaala barbarro si ciid ah;
saarista laamiyeyaasha oo farageliya kobaca habboon iyo horumarinta qaabka ugu muhiimsan;
haddii jirridda ugu weyn ay ka badan tahay 20 cm ka badan tahay laamaha wareega, waa in sidoo kale la jaraa.
Laamaha geedka ah ee geedaha miraha ah lama soo koobi karo, maxaa yeelay taasi waxay keenaysaa qalajinta. In geedaha graft, caleemaha xididka waa in laga saaro si aysan u yareeyo dhalidda ee cherry. Laamood waxay u baahan yihiin in la gooyo ilaa meesha ay ka samaysmaan laan ka soo baxa. Geedo dheeraadka ah ee gabowga ayaa la sameeyaa 2-3 sano.
Waa muhiim! Markaad samaynayso manjooyin, waxaa muhiim ah in la sameeyo tan ka hor geedku wuxuu bilaabmaa casiir badan oo dheecaan ah. Haddii kale, geedka ayaa adkaan doona inuu soo kabsado oo uu jirrado.
Qiimaynta qoryaha qubeyska
Kuwa bilowga ah ee beerta, ma noqon doonaan meel ka baxsan si ay u ogaadaan in ay suurtogal tahay in ay ku faanaan geedaha cherry jir ah ee guga iyo astaamaha shuqulladaas. Geedka geedo jir ah ayaa la sameeyaa si loo yareeyo buundada loona soo celiyo dhalidiisa.
Sababtoo ah waa lagama maarmaan in la yareeyo tirada laanta laamiyaanka ah iyaga oo gaabin ama qayb ka mid ah dhererka saddexda dhererka. Marka laga soo tago caleemaha, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto lafaha qalfoofka kelyaha ama soo saaro laamood. Kobaca sanadlaha ah ee geedkii hore lama tirtiri karo.
Rejuvenation of taajka waxaa la fuliyaa oo kaliya marka laamihii qalfoofka geedka ee u dhashay ee salka, iyo kordhin sanadlaha ma gaaraan 15 cm dherer. Xaaladda qalajinta ee laamihii ee dhexda of taajka, laamaha la gooyaa on laamihiisa dhinaca.
Ma taqaanaa? Marka la gooyo qoryaha qoryaha qorraxda, ma waxaad ka saari kartaan laamaha badan markasta. Tani waa in la fuliyaa marxaladaha, dhawr sano.
Bush iyo geedka: waa maxay johannesörka kala duwan ee kala duwan
Manjada saxda ah ee cherry ah waxa ay u dhigantaa hababka kala duwan ee geedaha iyo baadiyaha noocyada qoryaha. Dhirta cherry geed waxay ku yaalaan on koritaanka sannadlaha ah iyo laamaha bouquet, qaadashada miro dhowr sano, iyo in jeeriga nooca Bushiga nooca berry midho leh oo kaliya sanadkiiba.
Cherry spray budada waa la fuliyaa marka dhamaadka ee laamihiisa ay bilaabaan inay u dhashay. Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo laamaha ilaa nus ama saddex meelood meel ka mid ah dhererka, iyo iskudhafka yar yar iyo qalfoofka - si ay u nuugaan ama burooyinkooda ka soo baxaan. Abuurista taajka geedaha baadiyaha ah, 7-8 laamood iskood ayaa laga tagay.
Waxay ugu fiican tahay hal sano si loo dhajiyo laamaha qalfoofka, iyo tan xigta - semi-skeletal. Waa lagama maarmaan in geedka uu leeyahay waqti uu ku soo kabsado oo uu midho u dhasho sannad walba. Kama saari kartid xayeysiiska sanadlaha ah ee ka dhacaya sababtoo ah manjooyin noocaan ah, haddii kale laantu way engegi kartaa.
Xeerarka Dalagga ee Geedka
Ka feker sida habboon si aad u jilciso jeeriga. Shaqooyinkaasi waxay ku kooban yihiin wax yar yar oo caleemaha sannadlaha ah, taas oo keenaysa in ay ku jiraan bucin bouquet ah.
Marka caleemaha sannadlaha ah ma gaaraan 15 cm dhererka, iyo laamaha qalfoofka waxay leeyihiin saldhigyo la jarjaray, waxay ku dhalinayaan jarista cherry geed.
Marka jirridda geedku gaadho dherer ahaan 3.5 m, koritaankeeduna waa inuu ku koobnaado wareejinta laamaha qalfoofka iyo kan ugu weyn ee looxyo lafdhabarta. In cherry geed, 5-6 skeletal laamaha ayaa loo tagay si ay u sameeyaan taajkii.
Sidaas darteed, goynta sanadlaha ah iyo kahortagga ee jeeriga waxay yeelan doonaan waqti iyo dadaal. Si kastaba ha ahaatee, natiijooyinka manuucyada noocan oo kale ah iyo wax soo saarkooda soo hagaagay ayaa horeba loo arki karaa sanadka ugu horeeya ee manjooyin. Sidaa darteed, xitaa bilaabi beerta, oo sameeyey habka si sax ah, waxay awood u yeelan doontaa in ay soo gabagabeyso in ay lagama maarmaan tahay in ay jimicsiga jeeriga guga.